लेस्टरको एक खेल अगावै सिटी दोश्रो स्थानमा, बर्न्ली माथि फराकिलो जित !! - Experience Best News from Nepal
लेस्टरको एक खेल अगावै सिटी दोश्रो स्थानमा, बर्न्ली माथि फराकिलो जित !!
प्रकाशित मिति : बुध, मंसिर १८, २०७६
इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीले बर्नलेमाथि ४–१ को जित निकालेको छ । ग्याब्रियलल जेससले दुई गोल गर्दा सिटी तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो । सिटीको जितमा पछिल्लो तीन खेलमा पहिलो जित निकालेको हो ।
२४ औँ मिनेटमा ग्याब्रियल जेससले २४ औँ मिनेटमा गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफमा सिटीले तीन गोल थप्यो ।
५०औँ मिनेटमा ग्याब्रियल जेससले ब्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । ६८औँ मिनेटमा रोद्री हर्नान्डेजले गोल गर्दै सिटीलाई ३–० को अग्रता दिलाए । ८७ औँ मिनेटमा रियाद मेहरेजले गोल गरेपछि म्यान्चेष्टर सिटीले चार गोलको अग्रता लियो ।
८९ औँ मिनेटमा ब्राडीले बर्नलेका लागि गोल गरेपछि त्यो सान्त्वना गोल बन्न पुग्यो । जितसँगै सिटीले शीर्ष स्थानको लिभरपुलसँगको दूरी आठ अंकमा झारेको छ । सिटी ३२ अंक छ भने शीर्ष स्थानको लिभरपुलको ४० अंक छ ।
म्यानचेस्टर डर्बी – सिटीको घरेलु मैदानमा युनाइटेड भिड्दै !!
प्रशिक्षक विना आर्सनलको घरेलु हार !! ९ खेल जित विहिन !!
प्रिमिएर लिग लिभरपूलको जित यात्रा, सिटी रोकिदा चेल्सीको हार
प्रिमिएर लिगको अग्र पंक्तिमा भार्डी !!
मौरिन्होको सकारात्मक सुरुवात, सन्, लुकास र केन चम्किदा स्पर्सको जित !!
यस साता प्रिमिएर लिगको खेल तालिका यस्तो !! चेल्सीले सिटीसंग भिड्दै अन्य खेलकको विवरण सहित !!